Naing BSell | Item - 🍃 Silu hair coat(Silu ခေါင်းလိမ်းဆီ)🍃 60 ml လက်ဟောင်းအစစ် စေးကပ်မူ လုံးဝမရှိ ❄ ကိုယ်တိုင်​သုံးတယ်​. အနံ့​လေးက စွဲ​ဆောင်​မှုရှိပြီး ​ လက်ဟောင်း ပစ္စည်း အစစ်မို့ စေးကပ်ခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူး အတုတွေထွက်တာ စေးကပ်တယ်နော် ✨ ဆံကေသာကိုမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ချစ် cus
အမှန်တကယ် အသားဖြူ ဖျော်ရည်မှုန့် 
Maybelline မိတ်ကပ်ရည် + creampuff set
Mythic Oil Hair coat
🍃 Silu hair coat(Silu ခေါင်းလိမ်းဆီ)🍃 60 ml
လက်ဟောင်းအစစ် စေးကပ်မူ လုံးဝမရှိ
❄ ကိုယ်တိုင်​သုံးတယ်​. အနံ့​လေးက စွဲ​ဆောင်​မှုရှိပြီး ​
လက်ဟောင်း ပစ္စည်း အစစ်မို့ စေးကပ်ခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူး
✨ ဆံကေသာကိုမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ချစ် customer တို့အတွက် သုံးဖူးသူတိုင်းကြိုက်တဲ့ silu hair coat 😍
✨ မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် ဆံပင်ဆိုတာ ဒုတိယမျက်နှာဖြစ်လို့ဆံပင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင့်လးတွေလှနေမှပြည့်စုံမှာနော်
✨ဆံပင်ဖြောင့်လိုက်ကောက်လိုက်အရောင်ပြောင်းလိုက်မို့ဆံပင်သာတွေပျက်စီးနေတယ်ဆို မပူပါနဲ့ silu ကထုတ်တဲ့ ခရုရဲ့အဆီအနှစ်တွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ silu hair coat သုံးကြည့်ပါ
✨ဖြောင့်ထားသောသူများကောက်ထားသောသူများ နဲ့ရိုးရိုး သာမာန်ဆံပင်များ မစိုမခြောက် အချိန်လေးမှာ လူးပေးရမှာပါရှင့်..